Erling Haaland Oo Sharaxay Sababtii Uu Ugu Digtay Goolhayaha Sevilla Oo Uu Ugu Hor Dabaaldegay Markii Uu Rigoorada Ka Dhaliyay | Laacibnet.net
HomeBundesligaErling Haaland Oo Sharaxay Sababtii Uu Ugu Digtay Goolhayaha Sevilla Oo Uu Ugu Hor Dabaaldegay Markii Uu Rigoorada Ka Dhaliyay
Erling Haaland Oo Sharaxay Sababtii Uu Ugu Digtay Goolhayaha Sevilla Oo Uu Ugu Hor Dabaaldegay Markii Uu Rigoorada Ka Dhaliyay
Erling Haaland ayaa sheegay in qiyaanadii uu sameeyay goolhayaha Sevilla Yassine Bounou inay ka soo baxday ka dib markii Borussia Dortmund ay ka talaabsatay kooxda reer Spain islamarkaana ay u gudubtay wareega sideed dhamaadka Champions League.
Dortmund ayaa 3-2 ku hogaamineysay lugtii hore, iyadoo kabtanka kooxda Marco Reus uu kubad u dhigay Halland oo shabaqa soo taabsiiyay daqiiqadii 35aad.
Sheekadii ugu xiisaha badneyd ee ciyaarta waxay dhacday qeybtii labaad markii ay ciyaarta socotay sagaal daqiiqo iyadoo Halland uu kubad la dhaafay Fernandes Reges islamarkaana uu shabaqa ka soo taabtay xagal ciriiri ah, laakiin goolkiisa waxaa loo diiday inuu qalad ku kacay.
VAR ayaase u dhigtay Dortmund rigoore madaama goolka ka hor uu Jules Kounde uu maaliyada ka jiiday 20 jirkaan isagoo xerada ganaaxa ku dhex jira.
Haaland oo rigoorada tuuray ayaa laga badbaadiyay markii hore laakiin VAR ayaa amartay in lagu celiyo tuurista rigoorada madaama uu goolhayaha ka soo baxay xariiqdiisa xilli hore, Haaland ayaana isku daygii labaad ku dhaliyay rigoorada.
Xiddiga reer Norway ayaa ka dib ku digtay goolhayaha Sevilla isagoo ku hor dabaaldegay taasoo keentay inay si carro leh ugu soo cararaan xiddigaha kooxda Sevilla.
Sida uu sheegay Haaland, goolhaye Bounou wuxuu helay ciqaabta qiyaanadii uu sameeyay markii uu badbaadiyay rigooradiisii hore.
“Si aad ah ayuu uga soo baxsanaa xariiqda goosha, haddii uu xariiqdiisa ku ekaan lahaa waan dhalin lahaa rigooradeydii hore, taas ayaana dhacday rigooradii labaad” ayuu yiri weeraryahanka.
“Marka ugu horeysay taas ka hor waxaan dhaliyay gool fiican ka dib rigoorada oo aan qasaariyay. Ka dib qiyaano ayuu sameeyay sidaasi darteed inaan dib u tuuro ayay noqotay, waana dhaliyay markii uusan qiyaano sameynin.”
Markii la weydiiyay haddii uu walwalsanaa markii uu tuurayay rigoorada ku celiska ah, wuxuu yiri: “Haddi aan daacad u hadlo waan ka walwalsanaa rigoorada labaad. Laakiin markii uu wajigeyga hortiisa ku qeyliyay ka dib rigooradii koowaad, waxaan ku fekerayay ‘alla fiicnaan laheyd inaan mid kale kaa dhaliyo’ taas ayaana dhacday aad ayayna u fiicneyd.”